Sabotsy 07 Desambra 2019. – FJKM
Sabotsy 07 Desambra 2019.
Rehefa ampilaharina ny fitsingidinan’i Babylona sy ny fisandratan’Israely sy i Joda dia vao mainka misongadina ny fandresen’ny Tompo.
1-Mitsotsori-midina hatrany i Babylona
Nanomboka tamin’ny fotoana nitenenan’ny Tompo fa hamaly an’i Babylona ny raharaha (and33). Ny Tompo mihitsy no miady aminy ka dia resy tanteraka izy (and36), tsy vitan’izay , rava i Babylona ka tsy nahataona tao aminy intsony ny Israely sy i Joda izay nobaboiny izy . Fahafatesana no manenika ny tanin’ny Kaldeana (and47).
2-Mankalaza ny fandreseny ny Tompo
Fahafahana ho an’ny babo no nateraky ny famalian’ny Tompo ny namelezana ny olony (and48). Hatrany amin’ny bokin’ny Apokalypsy no mbola hiderana ny Tompo noho ny hahatanterahan’ny fandravana an’i Babylona (Apo 18.20) »…toy izao no hilentehan’i Babylona ka tsy hifongarany intsony ... » hoy ny namaranan’i Jeremia ny faminaniany (and64).
Miantso antsika ny mpanao salamo noho izany manao hoe: « Mihirà fihiram-baovao ho an’ny Tompo , fa efa nanao fahagagana Izy , ny tànany ankavanana sy ny sandriny masina no nahavitany famonjena « Sal 98.1
Talata 28 Janoary 2020
Alatsinainy 27 Janoary 2020.
Alahady 26 Janoary 2020.
Sabotsy 25 Janoary 2020.
Zoma 24 Janoary 2020.
Alakamisy 23 Janoary 2020.
Talata 21 Janoary 2020.
Alarobia 22 Janoary 2020.